Previous Article Ndị Ụmụeri Bi USA Edebàyela Mmadụ100 N'Amụmà Nchekwa Ahụike Anambra
Next Article Ụlọọrụ NAFDAC Emebiela Ọgwụ Adịgboroja Karịrị Ijeri Naira Atọ
"Nkea bụ nchọpụta dị egwu iji hụ na ndị chọrọ ọgwụ ahụ maka igbochie na ịgwọ ya bụ ọrịa nwetara ya, ma zọta ndụ ha," dịka Dọkịta Tedros Adhanom Ghebreyesus, bụ Onyeisi WHO kwuru. "Afọ ise gara aga, anyị nọ n'aka Chukwu n'ebe ọrịa ahụ dị maka enweghị ọgwụ dị ma ọ bụ nke mgbochi. Mana dịka nkwado na ọtụtụ nyochaa gara, Ebola bụ ọrịa enwere ike igbochi ma gwọkwaa."
Ọgwụ Ebola ahụ hụ nke a na-agba agba, Ervebo, bụ nke Merck, amara dịka MSD na mba ndị ọzọ abụghị US na Canada, rụpụtara. Ngalaba WHO Ndụmọdụ dị n'aka egosila na ya bụ ọgwụ na-egbochi ndị mmadụ n'ebe nje Ebola ahụ bụ Zaire dị, ma bụrụ nke ọ kwadoro maka iji chụọ ọrịa Ebola ọsọ ụkwụ eru ala.
Anyị ga-echeta na n'afọ 2014, ya bụ ọrịa kpara ajọ ike n'ala anyị bụ Naijiria na ọtụtụ mba ndị ọzọ, nke mere onye ọ bụla ụra aga n'anya, mee nwa na-ézé nne ya, enyi na-agbara enyi ya ọsọ. Nke a bụ oge otu nwoke si mba Liberia were buru ọrịa ahụ bata Naijiria. Ụfọdụ ndị mmadụ nwụrụ maka ọrịa ahụ nke gụnyere otu dọkịta nwaanyị na Abuja.